Luminous Sistemu Oku Na Uda - Imewe Mmewe
Sistemu Oku Na Uda
Sistemu Oku Na Uda E mere ya iji nye uzo ọkụ ergonomic ma mekwaa ụda ụda n’otu ngwaahịa. Ebumnuche ya iji mepụta mmetụta ndị ọrụ chọrọ ịmasị ma jiri nchikota ụda na ọkụ iji mezuo ebumnuche a. Usoro ụda ahụ mepụtara dabere na ntụgharị ụda ma mee ka ụda 3D dị gburugburu n'ime ụlọ ahụ n'enweghị mkpa maka wụnye na wụnye ọtụtụ ndị na-ekwu okwu gburugburu ebe ahụ. Dị ka ọkụ dị na ya, Luminous na-emepụta ọkụ na-apụtaghị ìhè. Igwe ọkụ a na-enye ọkụ dị nro, edo, na obere ọdịiche nke na-egbochi nsogbu na enwu.
Aha oru ngo : Luminous, Aha ndị na-emepụta ya : Mohammad Hossein Namayandegi, Aha onye ahịa : M. Namayandegi.
Sistemu Oku Na Uda Mohammad Hossein Namayandegi Luminous